2019-07-10 STOP Ransomware (.lokas) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key များ ထုတ်ပြန်ခြင်းဇူလိုင်လ (၁၀)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.lokas variant) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် mmCERT မှ Ransomware အား Reverse Engineering ပြုလုပ်၍ ရှာဖွေထားသော Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: 3uWOVCfd45q50p4PU204j5qPpRzALYbMPJ9Tft1 Password: B1ncdWjcAHtSkPscBrwNyQadFpWqVuNOLLW5FLt2
2019-07-07 STOP Ransomware (.cezor) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key များ ထုတ်ပြန်ခြင်းSTOP Ransomware (.cezor variant) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် mmCERT မှ Ransomware အား Reverse Engineering ပြုလုပ်၍ ရှာဖွေထားသော Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: MRrOmiaGsrOBV5WeKx9PFMAoug3J1vvarRjmmut1 Password: hUsT7SYVWZxEoeofd868ZIihPNCelGGAU4A48rt2
2019-07-04 STOP Ransomware (.besub) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key များ ထုတ်ပြန်ခြင်းSTOP Ransomware (.besub) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် mmCERT မှ Ransomware အား Reverse Engineering ပြုလုပ်၍ ရှာဖွေထားသော Password များကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: 3OfV7t3oSHGMTLJX2O7gTxqnrYXWDDEq84VwC3t1 Password: C8ZIANsrDD4lfaN9GNomrTCq862ilGeblDQDC5t2 . Personal ID: YFWoyszJCoUZKgsohEIZEtbrzYhrwFolyeTB824l Password: onOnDj6eNifj0xzWllFGlnpvja5zlRPiZHkoeVLn